Image: 10 Layer faritra PCB Board amin'ny Impedance Fanaraha-maso sy ny Holes Plugged amin'ny Resin
Multilayer PCB is the circuit board with more than two layers, such as 4 layers, 6 layers, 8 layers, 10 layers etc. It is double-sided multiple. And with common features as more than two layers conductive traces, separated by insulating material between the layers, and the layer between the conductive traces must connected through drilling, lamination as required. Multilayer PCB board miaraka maro sosona conductive-tariby, ary atsofony hakitroky avo. Izany no be mpampiasa amin'ny fitaovana elektronika.
Image: izany tsy tapaka Multilayer (10 Layer) PCB stack Up
Ultra Fine hitoby (3mil / 3mil)
Jamba ka nalevina Vias
High matetika Base Fitaovana
Small Hole ary atsofony, ary atsofony Laser
Mpitovo sy Differential maso Impedance
Halogen maimaim-poana, ambany fatiantoka, Ultra-manify, mifangaro entana
Ny kalitaon'ny PCB toky avy amin'ny varahina manomboka mitafy laminate (CCL) ampiasaina. Ny mifidy orinasa mpamatsy ambony taratasy marika toy ny Kingboard, Shengyi, ITEQ ho multi-sosona PCB famokarana mba hahazoana antoka mafy orina fampisehoana ny faritra vita board.Pls mahita ny PCB Board Raw Material Warehouse :